कोरिया सेरोफेरो | Gmoneytrans
यो भन्दैमा कोरिया आउनु भएको सबै नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले दु:खै मात्र पाएका छन् भनेर भन्न चाही नमिल्ने देखिन्छ। कोरियामा कामकै सिलसिलामा आएर व्यापार र काम दुवैमा राम्रो दक्ष्यता हासिल गरेर नेपालीहरुको नाम उच्च हुने कार्य गर्नेहरुको पनि सुची उत्तिकै लम्बिरहेको सत्यलाई नकार्न मिल्दैन। हरेक चिजको राम्रो र नराम्रो पक्ष हुने जस्तै कोरियाको पनि आफ्नै राम्रा न नराम्रा दुवै पक्षहरु छन्।
कोरियामा सजिलो र रमाइलो संग जीवनयापन गर्न सबैभन्दा भन्दा पहिले कोरियाको संस्कृति, दैनिक क्रियाकलाप गर्दा चाहिने जानकारीहरु लिन जरुरि देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा कोरियाको संस्कृति, खाना, चाड, यातायात आदिको ’boutमा केहि निम्न विषयहरुको ’boutमा जानी राख्नु राम्रो देखिन्छ।
कोरियाको यातायात व्यवस्था विकसित देशहरुझैँ उच्च स्थानमा पर्छ। दैनिक उपभोगको लागि विशेषगरि कोरियामा तीन किसिमको यातायात सेवा छन्
१. बस (bus)
क) भित्रिसहर बस सेवा
कोरियामा एकै सहर भित्र चल्ने बस सेवा एकदमै सजिलो र सस्तो मान्न सकिन्छ। सहर भित्रको बस सेवा प्राय हरियो, निलो र पहेलो रंगको हुन्छ। पहेलो रंगको बसले प्राय एउटै शहर भित्र टोल टोल मा सेवा दिन्छ, निलो रंगको बस सहर भित्रै पनि लामो दूरी मा चल्छ भने हरियो बस लामो दुरीमा चल्छ तर यसको बस स्टपहरु धेरै हुन्छ।
ख ) अन्तर सहर बस सेवा
प्राय रातो रंगको बस एक सहरबाट अर्को नजिकैको शहर जान प्रयोग गरिन्छ। लामो दुरीमा चल्ने यो सेवा सॊउल देखि सुवन, आन्सान, जस्ता शहरमा जान प्रयोग गरिन्छ।
ग) अन्तर जिल्ला बस सेवा
कुनै शहर/जिल्ला देखि अर्को शहर /जिल्ला जानु पर्दा लामो दूरीको बस प्रयोग गर्न सकिन्छ।
२. रेल सेवा
क) सब-वे (subway)
कोरियाको प्रसिद्ध शहर हरुमा सबवे सेवाको व्यबस्था हुन्छ। छिटो र समयमै पुग्नु पर्ने ठाउँ पुग्ने भएकोले यो सेवा सार्है सजिलो र लोकप्रिय छ। सोउलको सबवे, बुसानको सबवे आ-आफ्नो नेटवर्क मा चल्छ।
ख) KTX / ITX रेल सेवा
लामो दुरीको यातायातको लागि KTX/ ITX जस्तो द्रुत गतिमा चल्ने रेल सेवा पनि कोरियामा लोकप्रिय छन्। छिटो समयमा टाढा जानु पर्दा यो सेवा प्रयोग गरिन्छ। बस भन्दा महँगो भएपनि, सुबिधाले गर्दा यो सेवा प्रयोग गर्नेहरु धेरै छन्।
३. ट्याक्सी (taxi)
कोरियामा पनि ट्याक्सी को राम्रो सेवा पाइन्छ। नेपाल जस्तै यो सेवा बस भन्दा महँगो भएपनि छिटो भएकोले छोटो दुरीमा भ्रमण गर्दा ट्याक्सी प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। ट्याक्सी पनि कोरियामा विभिन्न किसिमका हुन्छन्।
प्राय कालो रंगको ट्याक्सीमा अंग्रेजी/English भाषा बोल्ने अथवा अंग्रेजी भाषाको सेवा हुने भएकोले अरु पहिलो,सेतो ट्याक्सी भन्दा महँगो हुन्छ।
टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा
कोरियामा संसारकै सबैभन्दा छिटो र छरितो इन्टरनेट सेवाको ब्यवस्था छ। प्राय इन्टरनेट र मोबाइल फोनको सेवा ३ प्रसिद्ध दुरसंचार कम्पनीहरुले प्रदान गर्दछ।
एलजी (LG), एसकेटी (SKT) र केटि (KT) कोरियाको सबैभन्दा लोकप्रिय इन्टरनेट र मोबाइल फोन सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरु हुन्।
कोरियामा दुई प्रकारको मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध छ। प्रि पेड (prepaid) र पोस्ट पेड (postpaid) सुबिधाहरु मध्ये प्रि पेड सेवामा पैसा अथवा ब्यालेन्स पहिलेनै चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भने पोस्ट पेडमा महिनाको अन्तिममा पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ।
कोरियन खाना विश्वमा ख्याती पाउने खानाहरुमा पर्छ। कोरियाको लोकप्रिय खाना (side dish) किम्ची संसारको स्वास्थ्यबर्धक खानाको सूचीको पाचौ स्थानमा पर्छ।
विश्वमा प्रख्यात कोरियन खानाहरुमा बिबिम बाप, सम्ग्यप्साल, खाम्जातांग आदि पर्छन्। नेपालीहरुको रुचि मिल्ने कोरियन खानाहरुमा किम्ची चिगे, सम्ग्याप्साल, खंजातांग आदि हुन्।
नेपालीहरु तथा बिदेशीहरु माझ कोरियन खाना अर्डर गर्दा आउने साईड डिश धेरै परिकारमा आउने भएकोले अचम्म मान्ने गरेको देखिन्छ। साधारणतय ३-४ किसिमको साईड डिश आउने भएकोले रमाइलो मात्र हैन विविन्न स्वाद पाऊने भएकोले आनन्दको अनुभव गर्ने गरेको पाईन्छ।
कोरिया को ऋतुहरु
नेपालमा ६ ऋतु जस्तै कोरियामा पनि ६ ऋतु हरु भएतापनि ४ वटा ऋतुहरुमा बाडिएको पाहिन्छ: बसन्त, गृष्म ,शरद र शिशिर ऋतु
बसन्त ऋतु : मार्च देखि मे ;
गृष्म ऋतु : जुन देखि अगष्ट ;
शरद ऋतु: सेप्टेम्बर देखि नोवेम्बेर;
शिशिर ऋतु: डिसेम्बर देखि फेब्रुअरी
कोरियामा बसन्त र शरद ऋतु रमाइलो गरिने र गृष्म र शिशिरमा सारैनै गर्मी तथा जाडो हुने भएकोले कोरियनहरु यी गर्मी र जाडोको छुट्टीमा कोरिया बाहिर घुम्न जाने चलन छ। बसन्त ऋतुको आगमनलाई ठुलो उत्साहका साथ मनाउने कोरियामा ‘चेरी बोसोम’ भन्ने चेरी फलको फुल फुल्ने समयलाई चाडको रुपमा मनाउछन्।
कोरियाको चाड पर्वहरु
कोरियामा नेपाल भन्दा थोरै चाड पर्वहरु छन्। कोरियाको ठुलाचाडहरुमा सलनाल र चुसक पर्छ।
कोरियाको नया वर्षलाई सलनाल भनिन्छ र यो जनवरीको अन्तिम हफ्ता तिर पर्छ। कोरियामा पनि लुनार क्यालेन्डर अनुसार नया वर्ष ‘सलनाल’ अंग्रेजी नया वर्ष भन्दा फरक हुन्छ। नया वर्षमा नेपालको जस्तै साथी भाई, आफन्तहरु मिलेर संगै रमाइलो गर्ने चलन छ।
सलनाल जस्तै चुसक पनि कोरियाको ठुलो चाडमा गनिन्छ। यसलाई कोरियामा भएका नेपालीहरुले ‘कोरियाको दशैँ ‘ पनि भन्ने गरेको पाइन्छ।
अक्टोबरको ३-५ चौं मितिहरुमा पर्ने यो चाडमा कोरियनहरु आफ्नो पैतृक घर जाने र सपरिवार रमाइलो गर्ने चलन छ। ‘सोंग्फ्यान्’ नाम गरेको नेपाल मा नेवारी परिकार ‘योमरी’ जस्तै स्वाद हुने यो परिकार बिशेष यो चुसक चाडमा खाने चलन छ।
३. कोरिआको चाडहरु
– अंग्रेजी नया वर्ष ( जनवरी १)
– स्वतन्त्रता घोषणा दिवस (मार्च १)
– बुद्ध जयन्ती (मे ३)
– बाल दिवस (मे ५ )
– स्मारक दिवस (जुन ६)
– स्वतन्त्रता दिवस (अगस्त १५)
– राष्ट्रिय स्थापना दिवस (अक्टोबर ३)
– हंगुल दिवस (कोरियन भाषा) (अक्टोबर ९)
– क्रिसमस ( Chirstmas ) ( दिसेंबर २५)